Ngenyanga ka-Okthobha iRosari Discover ➡️ Khangela kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukuba ufuna ukufumanisa isizathu sokuba kutheni Ngenyanga ka-Okthobha iRosari, ibizwa njalo, hlala nathi, kuba kulo lonke eli nqaku siza kuchaza isizathu sesi sikhumbuzo kunye nembali yaso, ngoku masiqale.
Kubalulekile ukuba siyazi imbali yendlela eyasungulwa ngayo inyanga ka-Okthobha, ngakumbi umhla we-7 njengosuku lokuzinikela kuMama wethu osikelelweyo.
1 Kutheni u-Okthobha eyinyanga yeRosari?
1.1 Ubhengeze iNyanga yeRosari
1.2 Imvelaphi yeRosari
Kutheni u-Okthobha eyinyanga yeRosari?
Lo mbuzo usonjululwe ngendlela elula, kodwa ikwanayo nengcaciso enembali, kwaye namhlanje siza kuthetha ngazo zombini ukuze uziqonde ngokupheleleyo izizathu zokuthiya u-Okthobha njengeNyanga yeRosari, nantso indlela esiza kuqala ngayo. ngale nqaku.
Eyona mpendulo imfutshane yile: okoko u-Okthobha wayeyinyanga ekhethiweyo kwaye yasekwa ukubhiyozela isikhumbuzo seNenekazi lethu leRosari rhoqo nge-7 ka-Okthobha, kwaye ngenxa yesi sizathu inyanga iyabhaptizwa njengeNyanga yeRosari. Impendulo elula, kwaye ngaphandle komxholo omninzi, nangona kunjalo, kukho enye enzulu ngakumbi enebali ngasemva kwayo.
Ukuqala ukubalisa ibali kufuneka sibuyele emva kwixesha, kwinkulungwane ye-XNUMX, sizibeka kubukhosi bangaphambili bamaSilamsi base-Ottoman, ababemele isoyikiso somkhosi kumazwe aseNtshona Yurophu, iinkokheli zobu bukhosi zathumela umkhosi wamajoni Iinqanawa ukuze zihlasele ukhuseleko lobuKristu emazantsi eYurophu. Nangona kunjalo, uPopu Pius V ukwazile ukuqaphela ingozi enkulu ezimelwe zezi nqanawa, wagqiba kwelokuba acwangcise ezakhe iinqanawa ezibizwa ngokuba yi "Holy League" ezithunyelwe ukujongana neqela le-Imperial Turks.
Ukuba uyayithanda inqaku lethu, ungandwendwela iwebhusayithi yethu apho sinezinye izihloko ezininzi ezinje: IRosari kwiintliziyo ezingcwele zikaYesu waseNazarete.
Ubhengeze iNyanga yeRosari
Kungoko nge-7 ka-Okthobha ngonyaka we-1571, kwidabi lokuthatha isigqibo, iinqanawa ezimbini zajongana ukujonga ukuba leliphi kula macala mabini elilawula ukugcwala elwandle kwiMeditera, eAdriatic naseAegean Sea. Into eyayizakubamba iNtshona Yurophu yayisezandleni zabakristu ababesilwa nomkhosi wenqanawa owathunyelwa nguPopu Pius V, owawuneenqanawa zemfazwe ezingaphezu kwama-400, kananjalo eli dabi lomkhosi wamanzi lalilelona likhulu eNtshona kangangeenkulungwane ezininzi.
UPopu Pius V ucele onke amakholwa athembekileyo ukuba athandaze irosari, ukuze uMama wethu weRosari angenelele kumajoni amandla Umkhosi wokhuselo wamaKristu. Ke, ekupheleni kweMfazwe yaseLepanto, i-Holy League yoyisa umkhosi woBukhosi base-Ottoman, ngaloo ndlela ibuthintela ekuqhubekeni nokwanda kuyo yonke iYurophu.
Kunyaka kamva, uPopu Pius V wabhengeza usuku lombhiyozo nge-7 ka-Okthobha, ehlonipha uMama oSikelelweyo, owayesaziwa njenge-Lady of Victory kodwa ngokuhamba kweenkulungwane ezininzi, igama lakhe latshintshwa laba nguMama wethu weRosari. kuya kuba lula ukuqonda ukuba umthandazo sesona sixhobo sinamandla kwelo dabi elwandle.
Ngo-1571, iRosari yayiseyindlela entsha yokuthandazela icawa. UPopu Pius V wayenze umthetho osemthethweni wokumisela ukuzinikela kwiRosari kwinkunzi yenkomo ye-Consueverunt Romani Pontifices kwiminyaka embalwa ngaphambi kweMfazwe yaseLepanto. Okwangoku, ukubhengezwa kwendalo iphela kwaqonda ukuba ukuzinikela kuMama wethu osikelelweyo kwakusanda eYurophu, kwaye ngendlela efanayo umthandazo weRosari uyanda kwiindawo ezahlukeneyo kulo mmandla.
Ukuzinikela kwiRosari kwaphakanyiswa ngokukodwa ngenkulungwane ye-1566 nguSanto Domingo, kwathi ngenkulungwane ye-XNUMX nguSan Pedro Canisio, owokugqibela ngokweengxelo wayengulowo wongeza ivesi yokugqibela kuHlalelisa uMariya othi: “Mariya oyiNgcwele, Mama kaThixo, sithandazele thina boni ngoku nakwilixa lokusweleka kwethu ”, eyashicilelwa ngokusesikweni kwiCatechism yeBhunga laseTrent ngonyaka we-XNUMX.
Fumana imbeko kunye novuyo ngalo lonke ixesha ubiza igama elingcwele leNkosi yethu uYesu Krestu ngokuthandaza iRosari.
Imvelaphi yerosari inzima ngakumbi, kuba imitya isetyenziselwa ukubala imithandazo okanye iivesi zeZibhalo, le ndlela yeyakudala kwaye ifunyenwe nakwiinkcubeko ezingezizo ezobuKristu. Ngapha koko, kusenokwenzeka ukuba ukuphindaphinda komKristu imithandazo eli-XNUMX ngandlela thile kuxelisa ukwenziwa kweemonki zeLiturgy yeeyure, ezazithandaza iindumiso ezili-XNUMX yonke imihla.
Isakhiwo seRosari siphuhlisiwe ukuba siyazi njani namhlanje phakathi kwenkulungwane ye-XNUMX neye-XNUMX, kwaye imithandazo elikhulu elinamanci mahlanu yahlulwa yangamaqela amashumi amahlanu, yahlulwa ziivesi, namhlanje ezibizwa ngokuba ziimfihlakalo. Ezi mfihlelo ziqokelelwe zadityaniswa njengesixa seentyatyambo egadini, esithi sinyuse igama elithi "iRosari" ngale ndlela yokuthandaza.
IRosari yindlela yokuthandaza kwaye isaqhubeka nokuvela nanamhlanje, sisicelo esaziwa ngokuba yiFatima Prayer, kwaye yongezwa ekuqaleni kwenkulungwane yama-2002. Ngo-XNUMX, uPapa John Paul II wongeze iiseti ezintlanu ezintsha ezibonakalisiweyo Iimfihlakalo eziqaqambileyoOku kukukhuthaza ukuba ucamngce ngobomi bukaYesu.
Sisimemo sokuba yinxalenye yamava obabalo lukaMariya lomama kunye nokomoya njengoko esiqhubela kuNyana wakhe, uYesu. Ngesi sizathu kanye, ibingumthombo ongapheliyo wobabalo lokomoya kubo bonke abangcwele. Kungenxa yokuba sihlandlo ngasinye uthandaza iRosari ufumana imbeko nelungelo lokubiza igama likaYesu ngaphezulu kwamaxesha angamashumi amahlanu.
Eli xabiso lezinto zokomoya ezinikezelwa ngeRosari aziveli kwimithandazo kodwa zilinganisa uKristu ethobela intando kaBawo, elandela umzekelo kaMama wethu osikelelweyo. Siza kukushiya nevidiyo kwesi sihloko, sinethemba lokuba uza kubuya kungekudala. Kude ibe lilixa elizayo!